Makambani Ombomisa Vashandi Basa Nekutyira Kupararira kweCoronavirus
Zimbabwe Congress of Trade Unions iri kukurudzira hurumende kuti imboti vanhu vose vamire kuenda kubasa kunze kwevane mabasa akakosha senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chatouraya munhu mumwe chete muZimbabwe, VaZororo Makamba vakaradzikwa nezuro.
Mumwe murume akasangana namuchakabvu anonzi nebazi rezvehutano akabatwawo nechirwere ichi zvichireva kuti vanhu vatatu ndivo vabatwa nechirwere ichi munyika.
Kunyangwe hazvo hurumende isati yatora danho rekuti vanhu munyika yose vambomira kuenda kumabasa, mamwe makambani nemapazi ehurumende kusanganisira matare atotanga kuregedza kuita mamwe mabasa nekuudza vamwe vashandi kuti vagare kudzimba kwemavhiki maviri.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Doctor Israel Murefu vatenda kuti vamwe vashandi vari kumboendeswa kudzimba kuchisara vanhu vanoonekwa sevakakosha chete.
Munyori mukuru weZCTU VaJaphet Moyo vati havo pane vashandi vakawanda vanzi vambomira mabasa asi havana chivimbo kuti munhu wose ari kubhadharwa.
Gurukota rinoona nezvevhashandi Muzvinafundo Paul Mavhima vati zvekui vanhu vose vasaende kumabasa zviri kumutunamiri wenyika ndedare rake remakurukota rakaumbwa nezuro rine gurukota rezvehutano Doctor Obadiah Moyo sasachigaro.